Izindaba - Ungazikhetha kanjani okokulungisa indololwane futhi uyini umsebenzi nezici zebhande lendololwane?
Okokuqala, ake sikhulume ngokuthi yini i-brace engaguquki
I-brace luhlobo lwe-brace olubekwe ngaphandle komzimba ukuvimbela ukunyakaza okuthile komzimba, ngaleyo ndlela kusize umphumela wokwelashwa okuhlinzekwayo, noma kusetshenziselwa ngqo ukulungisa okungaphandle kokwelashwa okungahlinzeki. Ngasikhathi sinye, ukwengeza amaphuzu okucindezela ngesisekelo sokulungiswa kwangaphandle kungaba yinto yokuqinisa amathambo yokwelapha okulungisa ukukhubazeka komzimba.
① Qinisa amalunga omzimba
Isibonelo, idolo le-flail ngemuva kwe-polio, imisipha elawula ukunwetshwa nokuxhuma kwehlangothini lamadolo konke kukhubazekile, ukuhlangana kwedolo kuthambile futhi akuzinzile, futhi ukunwebeka ngokweqile kuvimbela ukuma. I-brace ingasetshenziselwa ukulawula ukuhlangana kwamadolo endaweni ejwayelekile eqondile ukwenza lula ukuthwala isisindo. Ezigulini ezine-paraplegia yezitho ezingezansi, ukuhlangana kwamadolo akukwazi ukuzinza endaweni eqondile lapho kumile, futhi kulula ukugoba phambili nokuguqa phansi. Ukusetshenziswa kwe-brace kungavimbela ukuhlangana kwamadolo ekuguquguqukeni. Esinye isibonelo ukuthi lapho imisipha yamaqakala ikhubazeke ngokuphelele, iqakala liyathamba futhi liyaqaqeka. Futhi ungagqoka izicathulo ezihlanganiswe ngensimbi noma ngeplangwe zokuqondisa izinyawo ezibhekene zezingane exhunywe ezicathulweni ukuze uzinze iqakala futhi wenze lula ukuma nokuhamba.
RotVikela ukuhlanganiswa kwamathambo noma ukuqhekeka esikhundleni sokuthwala isisindo
Isibonelo, ngemuva kokuthi i-femal shaft noma i-tibial shaft inengxenye enkulu yesici samathambo sokuxhunyelelwa kwamathambo mahhala, ukuze kuqinisekiswe ukusinda okuphelele kokuxhunyelelwa kwamathambo futhi kuvimbele ukuqhekeka kwamathambo kungenzeki ngaphambi kokuba isisindo silayishwe, umlenze ongezansi isibiyeli singasetshenziswa ukuyivikela. Le brace ingathwala isisindo phansi. Amandla adonsela phansi adluliselwa kwi-ischial tuberosity nge-brace, ngaleyo ndlela anciphise isisindo se-femur noma i-tibia. Esinye isibonelo ukulimala eqakaleni. Ngaphambi kokuphuka ngokuphelele, kungavikelwa nge-brace.
OrLungisa ukukhubazeka noma uvimbele ukukhuphuka kwakho
Isibonelo, iziguli ezine-scoliosis emnene engaphansi kuka-40 ° zingagqoka ivesti yokubopha izicathulo ukulungisa i-scoliosis futhi zivimbele ukwanda kwayo. Ngokuhlukaniswa okuncane kwe-hip noma i-subluxation, isibopho sokuthwebula i-hip singasetshenziswa ukunciphisa ukususwa. Okwehla konyawo, ungasebenzisa ubakaki oxhunywe esicathulweni ukuvikela ukwehla konyawo njalonjalo. Ukuze unciphise ikhanda nezinyawo eziyizicaba, ukwengeza ama-insoles nakho kuluhlobo oluthile lokuqina.
Umsebenzi wokubuyiselwa esikhundleni
Isibonelo, lapho imisipha yesandla ikhubazekile futhi ingakwazi ukubamba izinto, sebenzisa isibopho sokubamba isihlakala endaweni yokusebenza (dorsiflexion position), bese ufaka umfutho kagesi engalweni ye-brace ukukhuthaza ukusikwa kwemisipha ye-flexor kanye buyisela Izici zokubamba. Amanye ama-brace alula ngesakhiwo. Isibonelo, lapho umunwe ulahlekile, ingwegwe noma isiqeshana esime ku-brace forearm singasetshenziswa ukubamba isipuni noma ummese.
ExercisesAssist isandla sokuzivocavoca umzimba
Lolu hlobo lwabakaki lusetshenziswa kakhulu. Isibonelo, ukujwayeza ukuhlangana kwamalunga we-metacarpophalangeal kanye namajoyini we-interphalangeal, isibopho esibamba isihlanganisi sesihlaka endaweni yokwelulwa kwe-dorsal, kanye ne-brace enwebeka egcina ukuguquguquka kweminwe yokwenza ukuqondiswa kweminwe.
⑥ Yenza ubude
Isibonelo, lapho isiguli esinomlenze ongezansi esifushane simi futhi sihamba, i-pelvis kufanele ithambeke, futhi ukugoba kwesikhumba kuzobangela ukugoba okubuyiselayo komgogodla we-lumbar, ongadala izinhlungu eziphansi emuva ngokuhamba kwesikhathi. Ukuze wenze ubude bezitho zomzimba ezimfushane, amathe angaphakanyiswa. .
Ukulungiswa kwangaphandle kwesikhashana
Isibonelo, umjikelezo wentamo kufanele ugqokwe ngemuva kokuhlinzwa komlomo wesibeletho, umjikelezo okhalweni noma ivesti kufanele igqoke ngemuva kokuhlinzwa kwe-lumbar fusion.
Ngokwandiswa kwemithi yokuvuselela nokufika okuqhubekayo kwamashidi we-thermoplastic asezingeni eliphansi kanye nokushisa okuphezulu kanye nezinto zokwakha i-resin, izinsimbi ezahlukahlukene ezisebenzisa imibono yezakhiwo ze-biomechanical zihlala zakhiwa. Ngobuhle babo bokusebenza okulula nepulasitiki eqinile, bangathatha indawo ye-gypsum futhi basetshenziswe kabanzi ekwenzeni imitholampilo. . Ngokwezingxenye ezahlukahlukene zokusetshenziswa, ama-brace angahlukaniswa ngezigaba eziyisishiyagalombili: umgogodla, ihlombe, indololwane, isihlakala, inqulu, idolo neqakala. Phakathi kwazo, amadolo, ihlombe, indololwana nama-ankle brace kusetshenziswa kakhulu. Izinsimbi zesimanjemanje zokuvuselela zingakwazi ukuhlangabezana ngokugcwele nezidingo ezahlukahlukene zokukhubazeka kwangemva kokuhlinzwa, ukuvuselelwa, ukululama okusebenzayo, ukulawulwa kokukhishwa ngokuhlanganyela kanye nokuvuselelwa kobunikazi. Izinsimbi ezijwayele ukusetshenziswa zamahlombe zifaka phakathi: ama-brace wokuxhunywa ehlombe jikelele ahlangene kanye nama-braces ehlombe; Izindololwane zezindololwane zihlukaniswe ngamabhokisi endololwana ashukumisayo, ama-static elbow brace nama-brace braces. Ama-ankle brace asuselwa kubo Indima ihlukaniswe yaba yindawo ehleliwe, yokuvuselela nokuhamba kanye nomvikeli ohlangene weqakala. Kusukela kubhuleki langaphambi kokuhlinzwa, ukuvuselelwa kokusebenza ngokuhlanganyela, ukulawula ukuguqulwa kweqakala ne-valgus ngesikhathi sokuzivocavoca, kungadlala indima enhle ekwelashweni nasekuvuseleleni.
Lapho sikhetha ukuqiniswa kwendololwane ngokuhlanganyela, kufanele sikhethe ngokuya ngesimo sethu. Zama ukukhetha eyodwa enobude obuguquguqukayo ne-chuck, okusiza kakhulu ekuqeqesheni kwethu ukuvuselelwa.